Red yeast Osikapa ndọpụ (RYRE) Mmeju- Wisdompowder
Gịnị Bụ Red Yeast Osikapa ndọpụ
Red wepụ yist osikapa wepụ A na-eme RYRE mgbe ụdị ụdị akpọrọ akpọrọ Monascus purpureus na-agba osikapa. Ejiri osikapa agbaa ọchịchịrị na-acha uhie uhie ma na -emepụta ọgwụ chemical akpọrọ monacolin K nke nwere uru ọgwụ. RYRE abụwo akụkụ nke TCM (ọgwụ ọdịnala Chinese) kemgbe ihe karịrị narị afọ 10. Ka ọ dị ugbu a, a na-ere ahịa ya dị ka mgbakwunye na dịka nri ahụike gburugburu ụwa.
Kedụ ka Red Yeast Osikapa ewepụtara Ọrụ
HMG-CoA reductase enzyme bụ enzyme nke na-agbanwe molọtọ akpọrọ HMG-CoA mevalonate. Ihe mevalonate bụ ihe mgbochi dị mkpa maka 1000s nke ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ, dịka cholesterol. Monacolin K na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka lovastatin n'ihi na ọ na-ejikọ HMG-CoA reductase igbochi mmepụta cholesterol.
A nwekwara ike gbanwee Mevalonate ka molekulu di nkpa dika coenzyme Q10 nke na aru dika antioxidant.
RYRE nwere ogige ndị ọzọ na mgbakwunye na monacolin K. Ọ nwekwara usoro zuru ezu dị mgbagwoju anya ma e jiri ya tụnyere lovastatin. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, akụkụ ndị ọzọ nke osikapa yist osikapa nwere ike belata ihe ize ndụ nke mmetụta ndị monacolin K. kpatara dị ka adịghị ike akwara.
Ochicha na-acha uhie uhie na-ewepụta ọgwụ ma ọ bụ mgbakwunye?
Enwere ike ịkepụta osikapa yist osikapa dị ka ọgwụ na mgbakwunye. Nke a bụ n'ihi na otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na mpụta osikapa yist bụ monacolin K. A na-akpọ ya lovastatin nke bụ mpaghara dị ike na ọgwụ ọgwụ akpọrọ Mevacor. Yabụ, RYRE n'otu aka bụ mgbakwunye nke na-enyere aka wedata ala cholesterol ma n'aka nke ọzọ, Mevacor na-emepụta ọgwụ na-ekwu na ọ bụ ikike ikikere nke ihe eji eme ihe lovastatin.
A na-ekekwa nri lovastatin na osikapa yist na-acha ọbara ọbara dị ka ọgwụ ọgwụ FDA na-edenye. Ọ bụ ya mere RYRE na-ahọta onwe ya dịka ọgwụ na emeju emeju.
Osika osikapa na-acha uhie uhie
Ndị a kọwara n'okpuru ebe a bụ ụfọdụ n'ime red yist osikapa wepụ uru:
Red yist osikapa wepụ lowers Cholesterol
Nnukwu cholesterol adịghị mma bụ nsogbu ahụike siri ike metụtara oke ibu, nguzogide insulin, ọrịa strok, ọbara mgbali elu, na nkụchi obi. Otu ụzọ kachasị dị mma iji chịkwaa ogo cholesterol ọjọọ ma chekwaa ahụ gị na nsogbu ahụike ndị a bụ iri nri siri ike na ibi ndụ dị egwu. Agbanyeghị, mmadụ ole na ole nwere ike ibute nsogbu dị elu nke cholesterol ọjọọ n'agbanyeghị agbanyeghị usoro ndị a.
Red yist osikapa wepụ cholesterol na-achịkwa nsonaazụ na-esite n'ikike ya nwekwuo HDL (cholesterol dị mma) n'ọbara ma belata triglycerides na LDL (cholesterol ọjọọ). Nchịkwa osikapa na-acha ọbara ọbara na-egbochikwa ịba ụba ma nwekwaa ogo nke leptin na enzymes imeju.
N'ọtụtụ nyocha nke metụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 8,000 sonyere, ndị mmadụ na-ewere mgbakwunye osikapa na-acha ọbara ọbara lebelatala LDL (cholesterol ọjọọ) na ngụkọta cholesterol. Ha enwetaghị mbibi akụrụ ma ọ bụ ọrụ imeju.
Red Yeast Osikapa Wepụta Lowers mmachi
Ọfụma bụ mmeghachi omume a na-ahụkarị site na nchedo anyị nke echekwara iji kpuchido anụ ahụ anyị pụọ na ihe ndị si mba ọzọ na nnukwu ọrịa.
Ọrịa nwere ogologo oge ka agwere ekwenye na ọ kpatara ọnọdụ adịghị ala ala dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, na kansa. Ime nchoputa gosiputara Red yist osikapa Mmeju (RYRE) nwere ike inyere gị aka belata mbufụt ma mee ka ahụike ka nma.
Iji maa atụ, nchọpụta metụtara mmadụ iri ise na-arịa ọrịa metabolic gosipụtara na iwelata osikapa yist osikapa na mmanụ olivu belatara nrụgide nke oxidative belata nke bụ isi ihe na-akpata mbufụt na-adịghị ala ala ruo pasent 50.
N'otu aka ahụ, otu nnyocha ụmụ anụmanụ chọpụtara na oke na mebiri akụrụ nke e nyere osikapa yist osikapa ntụ ntụ belatara ọkwa nke protein dị iche iche metụtara mbufụt.
Red Yeast Osikapa ndọpụ nwere Anticancer Njirimara
Evidencefọdụ akaebe sitere na ọmụmụ anụmanụ na akụrụngwa na-egosi na mpụta osikapa yist nwere ike inye aka belata mgbasa na mkpụrụ ndụ kansa. Otu nnyocha gosiri na inye oke maka ọrịa kansa prostate cancer uhie yist osikapa ntụ ntụ belatara olu nke tum tum ma e jiri ya tụnyere ìgwè na-achịkwa. …
Nnyocha nyocha-gosipụtara gosiri na itinye osikapa yist na-acha ọbara ọbara ka mkpụrụ ndụ ndị na-akpata ọrịa cancer wedara uto mkpụrụ ndụ cancer ka ukwuu karịa lovastatin.
Red yist osikapa wepụ Mma Ọkpụkpụ
N'otu nnyocha metụtara ụmụ oke, osikapa yist na-acha ọbara ọbara belata ntụpọ nke oke na ụmụ oke na osteoporosis. Mice nyere osikapa yist na-acha ọbara ọbara nwere akwara dị mma nke ahụike na ịdị elu nke ịnweta mineral karịa nke placebo.
Mgbapụta yist osikapa na-abawanye usoro onyinye BMP2, nke dị mkpa maka ọgwụgwọ agbajiri agbaji.
Red Yeast Osikapa Wepụta Ọgwụ
Cheta na ego nke ihe kachasị mkpa akpọrọ monacolin nwere ike ịdị iche na osikapa yist na-acha ọbara ọbara. Nke a bụ n'ihi na enwere ọtụtụ ụdị yist na yist na ichekwa gbaa ụka dị iche iche. Nnyocha e mere na ụdị osikapa yist na-acha ọbara ọbara gosipụtara na ọdịnaya monacolin sitere na efu site na pasent 0.58.
Agbanyeghi na ihe omumu di iche iche ekwuola yist yist osikapa na-ewepu onunu ogwu, ị nweghi ike igwa ma uzo ị na-eji gha enwe ihe omimi monacolin. Ya mere, odi nkpa ka inyocha ọdịnaya nke mgbakwunye ahụ tupu ị kpebie ihe red yist osikapa iji.
Na TCM (Omenala Chinese Omenala), usoro osikapa yist na-acha ọbara ọbara gwara gị nwere ike ịdị elu. Agbanyeghị, ụfọdụ ọmụmụ ejirila osikapa yist na-acha ọbara ọbara wepụ mgmịnm mg 600 ugboro anọ kwa ụbọchị. Ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-atụ aro ị takingụ osikapa yist na-acha ọbara ọbara 1200 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Red Yeast Osikapa wepụ Mmepụta
Ndị a kọwara n’okpuru bụ ụfọdụ n’ime yist osikapa na-acha ọbara ọbara;
N'ọtụtụ ndị mmadụ, osikapa yist na-adịcha mma mgbe ejiri ya na onu were ihe ruru afọ 4 na ọnwa isii. Ihe a dabara na Instlọ Ọrụ Ahụike Mba (NIH).
A na-ahụ Lovastatin na ngwaahịa dị iche iche osikapa yist na-acha ọbara ọbara. Nnukwu oke nke wepụ ahụ na-ebute ọtụtụ yist osikapa na-acha ọbara ọbara dị ka mmerụ ahụ dị oke njọ na mmebi nke imeju na akụrụ. Lovastatin nke na-adịghị na osikapa yist na-acha ọbara ọbara nwere ike ịkọwa mmetụta ndị yiri ya.
Citrinin nwekwara ike ịnwe site na osikapa yist na-acha uhie uhie mgbe ọ na-eme ihe na-ekwesịghị ekwesị. Citrinin bụ ihe na-egbu mmadụ ma nwee ike imebi akụrụ. Nsogbu osikapa uhie uhie ọzọ nwere ike ịgụnye obi mgbu, isi ọwụwa na iwe iwe.
Red Yeast Osikapa Wepụ Mmekọrịta Ọgwụ
Ọgwụ na-ebelata cholesterol
Ọ gwụla ma n'okpuru ọgwụ dọkịta, ikwesighi iri osikapa yist na ọgwụ ndị na-ebelata cholesterol. Osikapa yist na-acha ọbara ọbara nwere ike ime ka mmetụta nke ọgwụ ndị a sie ike. Nke a na - eme ka ihe ize ndụ nke imebi imeju dị elu. Bụrụ na ị nọ n'okpuru statin ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla maka iwetulata cholesterol, gwa dọkịta gị tupu ị were osikapa yist acha ọbara ọbara.
Coenzyme Q10 (Nhọrọ)
Enwere ike ibudata ọkwa nke CoQ10 site na statins. CoQ10 dị ezigbo mkpa na ahụike nke akwara na obi. Ọ na-enye aka n'ịmepụta ume. Enweghị CoQ10 zuru oke nwere ike ibute ike ọgwụgwụ, mgbu akwara, mmebi na mgbu. Na mgbakwunye, osikapa yist na-ebelata CoQ10 na ahu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ị Coụ CoQ10 ma ị ka na-eji ihe na-acha uhie uhie yist, jiri nwayọ gwa dọkịta gị.
Red Yeast Osikapa Mmepụta Mmeju
Ihe mgbakwunye nwere osikapa yist na-acha uhie uhie ka e rere na US ogologo oge. Ha na-ebelata cholesterol na ihe ndị ọzọ dị n’ime ọbara mmadụ. Afọ ndị na-adịbeghị anya nke ozi dị bụ 2008 na 2009. Nri mgbakwunye A na-ere osikapa yist na-acha ọbara ọbara maka $ 20 nde kwa afọ. Dika nyocha Nnyocha Ahụike Mba na 2007, nde mmadụ 1.8 zara ndị niile bụ ndị America ejirila mgbakwunye cholesterol belata ahụike.
Agbanyeghị, ị ga-akpachara anya mgbe ị na-azụ mgbakwunye ndị a n'ihi na ụfọdụ ngwaahịa na-esite n'aka ndị na-ere ahịa na-ezighi ezi adịghị mma. Plefọdụ n'ime mgbakwunye ndị a nwere ike ịnwe mmetọ nke nwere ike imerụ ahụ.
Red yist osikapa wepụ ebe ịzụta
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta osikapa yist nke yist na-acha ọbara ọbara, ịkwụsi ike n'ịrụ ọrụ n'ịntanetị ma chọọ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ afọ na mmepụta nke herbal Mmeju. Chọọ maka ụlọ ọrụ nke etinyela nnukwu ego na ịzụta akụrụngwa na-ewu ewu.
Zhao SP, Lu ZL, et al. Xuezhikang, bupu cholestin, belatara ihe omume obi na udiri obi oria obi nke oria abuo: nyocha ihe omimi nke ndi oria bu oria nke oria nke abuo nke China bu ihe omumu mgbochi ogwu. J Cardiovasc Pharmacol. 2 Feb; 2 (2007): 49-2.
Peng D, Fong A, Agba AV (2017). "Nnyocha mbụ: Mmetụta nke Red Yist Rice Rice Supplement on Cholesterol Levels in Adults". Am J Nurs. 117 (8): 46–54. .
Wang J, Lu Z, Chi J, Wang W, Su M, Kou W, et al. Nnwale ọtụtụ ọgwụ na -emepụta ọgwụ na -eme ka uru mmanụ osiji ji Monascus purpureus (yist ọbara ọbara) si na nri ndị China. Curr Ther Res. 1997; 58 (12): 964-978.
1.Gịnị bụ Red Yist Rice wepụ
2.How na-acha uhie uhie Yist Rice wepụ Ọrụ
3.Is Achicha Yist Rice Mepụta Ọgwụ ma ọ bụ Mgbakwunye?
4.Red Yist Rice Wepụ Uru
5.Red Yist Rice Wepụ Ọgwụ
6.Red Yist Rice Wepụ Akụkụ Mmetụta
7.Red Yist Rice Wepụ Mmekọrịta Ọgwụ
8.Red Yist Rice Wepụ Mmeju
9.Red yist osikapa wepụ ebe ịzụta
Nwere ike 5, 2020
11 Otu uru ahụike nke Resveratrol Supplementments